Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Canada Jonathan David Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Na-adịghị Eke Ahụ Eke Ndụ
Isiokwu anyị na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke akụkọ Jonathan David, akụkọ gbasara akụkọ ndụ, mmalite ndụ, eziokwu enyi nwanyị, ndụ onwe onye, ​​ụdị ndụ, ezinụlọ na ihe ndị ọzọ ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo mgbe amaara ya.
Ee, onye ọ bụla maara na a na-ahụta ndị egwuregwu bọọlụ ka "ihe ọzọ na-esote Europe" dịka bọọlụ (bọọlụ) metụtara.
N'ikwu nke a, eziokwu ahụ bụ na ọ na-adọkpụ gaa n'okporo ụzọ ịbanye na ndepụta nke ịghọ Kachasị ndị egwuregwu bọọlụ Canada kachasị oge niile.
Agbanyeghị, ọ bụ mmadụ ole na ole na-ahụ egwuregwu bọọlụ tụlere ịgụ Jonathan David Bio nke anyị kwadebere, ọ tọkwara ya ụtọ. Ugbu a na-ebuteghị ọzọ, ka anyị bido.
Jonathan David Akụkọ Nwata
Nke mbụ, aha ya zuru ezu bụ Jonathan Christian David, a na-akpọkwa ya aha “Onye Pearl nke Canada. "
A mụrụ Jonathan David n'ọnwa mbụ nke Millennium ọhụrụ, abalị iri na anọ nke ọnwa Jenụwarị afọ 14, na ógbè Brooklyn nke New York City, United States. A mụrụ onye na-akwụ ụgwọ bọl dịka nwa nwoke mbụ n'ime ụmụ abụọ nne na nna ya.
Banyere ụbọchị ọmụmụ ya, eto eto bụ David bụ otu n'ime ụmụntakịrị ole na ole a mụrụ n'oge ejighị ihe n'aka na mbara ụwa.
Eziokwu bụ, onye ọkpụkpọ bọọlụ nke Canada bụ nwatakịrị ihu ọma. Mmalite nke Narị Afọ Iri Ọhụrụ ahụtụbeghị mmeghasị ọ bụla na teknụzụ ma ọ bụ Y2K, (aha ọjọọ millennium ahụhụ ahụ).
Ogbunigwe anaghị agbapụ na mberede na ụgbọelu dị ka amụma buru amụma adabaghị.
Millennium ahụhụ bụ hoax ka ọ dara ịta. - BBC
Dabere na Egwuregwu-Magazine Knack, Ndị mụrụ Jonathan David na-eleta ezinụlọ na New York obere oge tupu a mụọ ya.
Mama ya na nna ya kwetara ka nwa ha nwoke nwee United States ka ezinụlọ wee nweta ụmụ amaala site n'aka ya.
Ọnwa atọ mgbe amụrụ David, nne na nna ya nwere mmetụta na ọ dịghịzi ha mkpa ịnọ na steeti. Ezinaụlọ ahụ hapụrụ Port-au-Prince, Haiti.
Jonathan David Ezinụlọ
Bụ onye amụrụ na New York na igwu egwu nke otu ndị otu Canada apụtaghị na ọ nwere ezinụlọ ezinụlọ North America. Ezinụlọ Jonathan David malitere na Haiti, mba Caribbean.
Ọ bụrụ na ị dị nkọ n’akụkọ ihe mere eme, ikekwe ị ga-echeta obodo Caribbean maka ihe nwute. Ọ bụghị ihe ọzọ karịa ala ọmajiji ahụ dara mba nke Jenụwarị 12th nke 2010 nke gburu ndụ ihe ruru mmadụ 316,000.
Ala Haiti Ala nke Jenụwarị 2010. Image: Telegraph
Ọ bụ ihe n'abụghị mgbe David dị obere 6 (XNUMX)naanị afọ atọ tupu ala ọma jijiji ahụ), ndị mụrụ ya kpebiri ịkwaga Canada.
Inwe mgbọrọgwụ sitere na mba dara ogbenye, na-amụ nwa nwoke na New York, mgbe ahụ ịmara ihe kacha mma maka ya n'oge kwesịrị ekwesị pụtara ihe abụọ.
Nke mbu, Jonatan nwere ike buru na o sitere n ’ezi ezinaụlọ sitere n’ezinaụlọ. Nke abuo, ha nwere chi oma ha hapuru na Haiti afo ato tupu ala oma jijiji nke ime na 3.
Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ezinụlọ Jonathan David biri na Ottawa (isi obodo Canada) mgbe ha si Haiti kwaga. Na-etolite na Silicon Valley North bụ ihe na-agwụ ike maka nwatakịrị ahụ. Ọ bụ naanị oge ndụ ya na ezinụlọ ya na / ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ nọ.
Banyere agụmakwụkwọ ya, ndị nne na nna Jonathan David mere ka ọ debanye aha n'ụlọ akwụkwọ ọha na eze Francophone aha ya bụ Louis Riel, bụ ebe ọ zụlitere ịhụnanya ya maka football (bọl).
Dabere na ICI-Radio Canada, onye na-agba ụkwụ kwuru na ụlọ akwụkwọ a bụ ihe kpatara ya ji nwee ihe ịga nke ọma n'oge football. Ọ ghọrọ egwuregwu ịgba bọl na Louis Riel.
Ndụ Ndụ Mmalite
Jonathan David mgbe ọ dị obere dị ndụ na football-centric. Ọbụna n'etiti ọgbọ ya, onye na-agba ụkwụ ahụtụbeghị nrọ egwuregwu football ya dị ka echiche efu nke na-agafe agafe. N'ụlọ akwụkwọ, nwa akwụkwọ ahụ na-anụ ọkụ n'obi malitere ọrụ egwuregwu ya na ndị otu ya.
N'oge ahụ, David nwere mkpebi siri ike igwuri egwu na Europe. Site na mmalite, ọ nweghị ọchịchọ igwu egwu na North America ma ọ nweghị mmasị ile egwuregwu bọl Canada ma ọ bụ bọl US Major League.
Maka nwatakịrị nwoke nwere ndidi, ọ baghị uru na mpaghara ya bidoro ma ọ bụrụhaala na ọ kwụsịghị nrọ.
Mgbe oge ruru, onye na-agba bọọlụ na-eto eto bidoro ọrụ dị ala na mpaghara Gloucester Dragons. Ọ gara na Ottawa Gloucester Hornets wee gaa, Ottawa Internationals n'etiti afọ 2011 ruo 2018.
Mgbe e nwesịrị ọtụtụ ule ndị dara ada, n'ikpeazụ, ezinụlọ Devid bịara nwee ọ joyụ. Ọụ nke ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya amaghi oke n'otu oge ụfọdụ ndị otu ndị Europe kpọrọ ha ka ọ nwalee ha.
Ihe ndekọ Jonathan Jonathan - Roadzọ a ma ama Akụkọ
Maka onye ọ bụla na-achọ ịgba mbọ n’egwuregwu, ọ na-esiri ya ike ịhapụ ma nne na nna ya na ndị ezinaụlọ ya ka ha nwee ike chọọ nrọ football na kọntinent ọzọ.
Ị maara? Onye egwuregwu bọọlụ Canada detụrụ obi mgbawa na Europe. David dara ọdịda ọnwụnwa ya abụọ maka Red Bull Salzburg na Stuttgart tupu ọ gafee nke KAA Gent (ụlọ ịgba bọl na Belgium).
Lifemalite ndụ na De Buffalo (aha aha KAA Gent) adịghịkwa mfe. N'ime ọzụzụ mbụ, a gwara David (afọ 16) ka ọ zụọ Gent nke U21. N'ikwu okwu banyere ahụmịhe siri ike, ọ sịrị:
“Ọ dị m ka m mere ihe ọjọọ nke na Ghent enweghị ike ịhapụ ma hapụ m. Otu ehihie, e nwere ọzụzụ nke abụọ ma ọ dabara nke ọma na m nwere ike ịgbake.
Obi siri m ike mgbe onye nchịkwa bịara gwa m na enwere m ihe pụrụ iche. ”
Jonatan David's Biography- Na-ewu Onwe Ya Akụkọ
Tụnyere Gent ka ọ nọrọ n'ọkwa klọb kachasị na Europe enweghị isi. Iji chọpụta, nwa okorobịa David (afọ 19) kpebiri atụmatụ nke ịme ọtụtụ ihe mgbaru ọsọ maka klọb na mba ya.
Chi nke bọọlụ gọziri onye egwuregwu bọọlụ Canada mgbe ha nwetara otu egwuregwu akara aka (ọ na-agba 5 n'ime egwuregwu ise mbụ ya), ihe egwu butere Gent ịgbatị nkwekọrịta ya na 5.
Ebube site na ịchọta ihe mgbaru ọsọ 30 na Belgian League (n'ime oge dị mkpirikpi), kpakpando na-eto eto mezuru nrọ ya site na ịche ihe mgbaru ọsọ mgbe ị na-arụ ọrụ mba.
… David jidere nsọpụrụ mmadụ atọ na afọ 2019 (mgbe ọ dị afọ 19) niile na ekele maka ihe mgbaru ọsọ ya na-enweghị isi. Ndị a gụnyere gụnyere:
(i) Ntutu onyinye nke Gold CONCACAF nke Gold CONCACAF
(ii) Ngw'oru olagu nke CONCACAF Gold Cup XI
(iii) Onyinye Player nke ndi Canada nke 2019
Nkwugharị nkwugharị nke gosipụtara ọwụwa ya
Onye isi oche Gent Ivan de Witte kpebiri ịgbatị nkwekọrịta ya ọzọ (na 2023) ozugbo ha hụrụ nnukwu klọb na-agba ya gburugburu dị ka sharks.
Ọbụna ọrịa na-efe efe COVID-19 ezughi iji gbochie ndị na-egwu egwuregwu ịchụso mbinye aka ya. Ruo mgbe Coronavirus kwụsịrị ndị Belgium, David nke na-enwusi ike nwere ihe mgbaru ọsọ 18 na 8 na-enyere aka maka oge 2019/2020.
Na Belgium, ugbu a enweghi nwa agbọghọ nwere mmetụta dị otú a na ndị otu ya dịka Jonathan David. Ebe ọ bụ na mgbe nchọpụta nke Alphonso Davies, Ndị na - agba ọsọ na mba Canada egosila na ọ ga - abụ nkwa mara mma ga - esote ọgbọ ọgbọ bọọlụ. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Mmekọrịta Jonathan David Life- Girlfriend, Single or Married?
Onye bu Jonathan Girl Girl? Ebe e si nweta ya: SportsMag Knack
N'ụzọ dị mwute, ọfụma ndị Canada na-aga n'ihu na-akọ akụkọ maka oke ike ya. Na nso nso a, enwere ezigbo ọchịchọ ịmara ma Jonathan David nwere enyi nwanyị ma ọ bụ ịchọpụta ma ọ lụrụ di na nwunye - ya na nwunye nzuzo na ụmụaka.
Mgbe anyị gụsịrị ọtụtụ weebụ, anyị eruola ná nkwubi okwu na Jonathan David (n'oge a na-ede akwụkwọ) emeela mgbalị siri ike ịghara ikpughe nkọwa nke ndụ mmekọrịta ya. Ikekwe ndị mụrụ ya na ndị ndụmọdụ ya nwere ike iche na ọ bụ n'oge mmalite maka ọrụ ya.
Jonathan David Ndụ
Mata Jonathan David Personal Life. Àgwà: Knack Sports Magazine
Ọnye na-bụ Jonathan David?, Onye Canada Soccer Player
Tomata ihe banyere Jonatan nke onwe ya na olulu ga - enyere gi aka ighota ya nke oma. Nke mbụ, ndị ịgba ọsọ ụkwụ kwenyere na ọ bụghị naanị ịme ihe mgbaru ọsọ kama inwe mmetụta dị nro n'okwu metụtara obi ya.
Eziokwu bụ, onye Canada nwere njikọ chiri anya na ọdịnala ezinụlọ nke Haiti. Nke ka nke, Jonathan David nwere ikike icheta otu ihe omume niile (nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ) site na mgbe ọ bụ nwata.
Kemgbe ọ bụ nwata, onye egwuregwu bọọlụ Canada eburula Haiti n'obi ya kemgbe obodo ahụ nwere oke ala ọma jijiji nke 2010. David Jonathan hasụrụ iyi iji ego bọọlụ ya iji nyere ndị ezinụlọ nọ na Pearl nke Antilles aka.
More na ndụ ya:
Onye otu egwuregwu Canada nwere ọnọdụ nke nnwere onwe, nke na-eme ka ọganihu dị ukwuu na ndụ ya na ọrụ ya. Nwatakịrị nwere ikike iduzi ụzọ, na-eme ezigbo atụmatụ maka ndụ ya.
N'ikpeazụ, David bụ onye na-echeghị na ọ dị mkpa ịnọchite anya nna ya, nne ma ọ bụ nwanne ya nwanyị nwere nka (tattoos). Site na echiche okpukpe, ọ bụ Onye Kraịst nwere ntụkwasị obi nke na-alaghị azụ ito Chineke mgbe ọ gụrụ akwụkwọ.
Maka onye na-eto eto nke na-eto eto, ezinụlọ ya bụ nkwado maka ọ nweghị mgbe ọ ga-akwụ ụgwọ maka ya. Mee mmiri ozuzo ma ọ bụ na-enwu, ha anọwo ebe ahụ iji kwado ya na usoro ọ bụla.
N'akụkụ a, anyị ga-ewetara gị eziokwu karịa banyere ndị nne na nna Jonathan David na ndị ezinụlọ ya.
Banyere Jonatan nne Devid
N'ụzọ dị mwute, nne nke ekpomeekpo bọọlụ nwụrụ n'oge mmalite nke ọnwa Disemba 2019. David gara Canada n'oge ọ natara ozi ọjọọ ahụ na ahụike nne ya na-akawanye njọ.
Dịka ọ bịarutere ezumike na njem (ebe London kwụsịrị), a gwara ya na mama ya nwụrụ n'ụzọ dị egwu. E mere olili ozu Jonathan David na Disemba 14, 2019, ya na ụmụnne nna ya, nwanne nne ya, nwanne ya, nna ya na ndị ikwu ya ndị ọzọ bịara.
Banyere Jọnatan Nna Devid
Nna nke ndị na - agba ọsọ ugbu a na - ebi ndu naanị ya mgbe ọ nwụsịrị nwunye ọ hụrụ n'anya na Disemba 2019. Okporo ụzọ David nke kpakpando agaraghị adị ụtọ dịka ọ na - enweghị enyemaka nke nna ọ na - ahụ dị ka isi okwu mbụ ya mgbe ọ bụla ihe na - adịghị mma.
Banyere Jonathanmụnne Jonathan
Ndi ochichi ndi Canada nwere nwanne nwanyi nke buru nwanne ya na nwanne ya. Ọ dị ka ndị nne na nna Jonathan David ga-enwerịrị nwanne ya nwanyị na Haiti ma ọ bụ Canada n'ihi eziokwu ahụ ọ nọrọ n'oge ọ bụ nwata na mba ndị a.
Eziokwu banyere Jonathan Jonathan
Eziokwu banyere Jonathan Jonathan. Ndị ọgba bọọlụ bi ndụ dị umeala na Belgium.
Onye Pearl nke Canada na-ebi ndụ a ahaziri ahazi n'obodo Ghent, East Flanders (Belgium). Jonathan David na-ebi ụdị ndụ dị ala, nke enweghị mmefu na-enweghị isi.
Dịka ndị egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ na-eto eto, ya bụ; Ibrahima Konate, Eberechi Eze, wdg, ndị na-agba ọsọ ga-egbo mkpa ndị na-adịghị efu nnukwu ego.
Net Worth na ụgwọ ọnwa
Na-eche na ọ bụ ndị na-eto eto na-eto eto nwere ụgwọ dị mma nke € 13K kwa izu, ọ dị mma ịsị na akụ David Jonathan nwere ike ịbụ ihe ruru $ 1 Million. Dabere na SoFIFA stats, ndị ịgba bọọlụ Canada na-anata ụgwọ ọnwa kwa afọ nke € 676,000.
Jonathan David Eziokwu
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ụfọdụ ihe anyị na-eti na ị maghị maka igwe ihe mgbaru ọsọ ndị Canada.
Eziokwu nke 1: Ihe SOFIFA kwuru gbasara ya
Jonathan David FIFA akụkọ.
Mgbe ọ dị afọ 20, Jonathan David na-emebu FIFA. N'ihe banyere oke ya nwere, enwere ike idobe ya n'etiti na 10 kasị mma pụtara ìhè n'ụwa.
Eziokwu nke 2: Ihe egwuregwu riri ya na PlayStation fọrọ nke nta ka ọ daa ọrụ ya
N'oge ọ dị afọ iri na ụma, David hụrụ mgbe oge egwuregwu riri ya na PlayStation mebiri emebi ya. Nke a bịara n’oge ọ chọrọ itinye uche na imezu ebumnuche ya- na-egwu egwuregwu bọọlụ European.
O were mbọ nke onye na-azụ chi rụọrọ ya ọrụ. N'ihi njide onwe onye o nyere ya, Devid zeere omume ndị riri ya ahụ.
Eziokwu nke 3: Onye ọ na-efe dika Football Idol ya
N'ụwa niile, ọtụtụ ndị na-eto eto na-egwu egwuregwu bọl na-ele anya kacha mma dịka arụsị ha- nke a gụnyere ihe amasị Christiano Ronaldo, Lionel Messi wdg. Dịka ndị na-eto eto na-eto eto, ọ naghị esiri Devid ike ịchọta ihe nlereanya ma ọ bụ arụsị bọl.
Banyere arụsị football ya, ị nwere ike iche banyere ihe ndị na-amasịkarị ndị dike ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Agbanyeghị, ọ ga-eju gị anya na naanị aha gụrụ Jonathan Jonathan bụ Dwayne De Rosario, Canada bụ onye kacha enye goolu.
M nzọ ga-echetụghị Idol ya. Onyonyo: NBC, Express na miSoccer.
Eziokwu nke 4: Eziokwu Eziokwu
Ị maara? Canada (mgbe ọ dị afọ 20) nwere ọsọ nke ruru kilomita 33 kwa elekere.
Na-ekpe ikpe, n'ụzọ, ọ na-azụ ahịa ọsọ ọsọ ya, anyị ji n'aka na Jonathan David agaghị etinye oge n'etiti ya na top 5 kasị ngwa ngwa ụwa.
Vidio dị n'okpuru ga-enye gị ihe kpatara ọtụtụ klọb ndị isi Europe rịọrọ maka mbinye aka ya.
Daalụ maka ịgụ edemede a na Jonathan David. LifeBogger na-agba mbọ maka izizi na izi ezi n'ihe anyị na-eme kwa ụbọchị akụkọ nwata na eziokwu banyere ndu. Hụ ihe na-adịghị ele anya n'isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị.
James zuru ezu